Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafinao Apple ID | Vaovao IPhone
Carmen rodriguez | | App store, iTunes, IPhone Security, Fampianarana sy torolàlana
Ny zavatra voalohany ianaranao rehefa mividy fitaovana Apple dia izany mila manana kaonty iTunes ianao afaka manana fidirana amin'ny fividianana rindranasa, backup amin'ny iCloud na fividianana ao amin'ny App Store. Antsoina ity kaonty ity Apple ID.
Raha tsy nampiasa ny tenimiafinao hatry ny ela ianao, na tsy mahatadidy azy fotsiny dia misy fomba maro hamerenana sy hamerenana azy io. Mila fampahalalana ianao raha afaka manao an'io, izay lojika, satria tsy maintsy matoky izy ireo fa manome anao fidirana amin'ny kaonty anao izy ireo, saingy azo atao ny mitantana azy amin'ny iPhone iray ihany.
1 Avereno ny teny miafina amin'ny alàlan'ny mailaka fanarenana
2 Avereno ny teny miafina amin'ny fampiasana fanontaniana miafina
3 Avereno ny teny miafinao amin'ny alàlan'ny fanamarinana dingana XNUMX
4 Mamorona ID Apple
Avereno ny teny miafina amin'ny alàlan'ny mailaka fanarenana
Sokafy ny tranokala Safari ao amin'ny iPhone-nao ary mankanesa any iforgot.apple.com.
Ampidiro ny Apple ID. Aza adino fa ny ID-nao dia mety ho adiresy mailaka na andiana tarehintsoratra mialoha ny @.
Tsindrio eo manaraka eo amin'ny farany havanana amin'ny efijery.
Safidio "Amin'ny alàlan'ny mailaka".
Zahao ny mailaka fanarenana ary araho ny torolalana hamerenanao ny teny miafinao.
Avereno ny teny miafina amin'ny fampiasana fanontaniana miafina
Safidio "Miaraka amin'ny fanontaniana fiarovana".
Check daty nahaterahanao.
Soraty ny valiny telo momba ny fiarovana ary tsindrio ny manaraka.
Soraty ary hamafiso ny teny miafinao vaovaoTadidio fa ny teny miafina dia tokony ho farafahakeliny 8 litera ny halavany, tsy tokony ahitana mihoatra ny 3 ny litera mitovy amin'ny andalana, ary tsy maintsy misy isa, litera lehibe ary litera kely.
Avereno ny teny miafinao amin'ny alàlan'ny fanamarinana dingana XNUMX
Amin'ny alàlan'ny fanamarinana dingana roa ho an'ny Apple ID anao dia mila roa manaraka ireto farafaharatsiny ianao:
Ny tenimiafinao ID Apple
Midira amin'ny iray amin'ireo fitaovana atokisanao
Ny fanalahidy fanarenana
Raha sendra hadinonao ny teny miafinao, tsy maintsy fantatrao ireo angona roa hafa.
Ampidiro ny fanalahidy ary tsindrio manaraka.
Safidio ny fitaovana azo atokisana izay tianao hamarinina ny momba anao (tsara kokoa ny iPhone) ary tsindrio manaraka.
Soraty ny kaody fanamarinana vonjimaika amin'ny fitaovana atokisana voafantina ary tsindrio manaraka.
Soraty ny vaovao tenimiafina ary tsindrio manaraka.
Raha nanetsika ny fanamarinana XNUMX-dingana ho an'ny kaontinao ianao kanefa manana Adinoy ny teny miafina ary tsy manana ny fanalahidy fanarenana ianao, na dia mbola afaka miditra amin'ny fitaovana atokisana aza ianao tsy ho azo atao ny mamerina ny teny miafinao. Raha izany dia, tsy maintsy mamorona Apple ID vaovao ianao ary manomboka indray.
Mamorona ID Apple
Midira amin'ny App Store
Mikorisa mankany ambany ary kitiho mifandray
Select Mamorona Apple ID vaovao
Fenoy ny saha ary hanana ID Apple vaovao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafinao Apple ID
Placeholder sary maldenado dia hoy izy:
Hadinoko ilay fanabeazana aizana
Valiny tamin'i Miguel Maldonado
3334470618 dia hoy izy:
Tsy afaka miditra amin'ny sela ao amin'ny paoma aho
Valio ny 3334470618
ary ny valinteniko
Enedino Angelino alonso dia hoy izy:
Tsy afaka manokatra kaontiko iPhone aho
Valiny tamin'i Enedino Angelino alonso
Alexa dia hoy izy:
Te hanana kaonty vaovao aho
Mamaly an'i Alexa
Pedro Antonio Gutierrez norges dia hoy izy:
Tsy voaray ny hafatra fanarenana
Valiny tamin'i Pedro Antonio Gutiérrez norges
Naum ykegawa dia hoy izy:
Valio amin'i Naum ykegawa
Victor aguilef dia hoy izy:
Tsy tadidiko ny paoma id bo azoko havaozina ny hadsp satria mangataka amiko ny tenimiafina
Valiny tamin'i Victor aguilef
Tsy afaka mamerina ny kaontiko Apple aho, inona no tokony hataoko?
Salama, tsy afaka miditra amin'ny findaiko aho, satria manontany ahy ny kara-panondroko aho, ary ny marina dia, adinoko ny teny miafina, ahoana no hamerenako azy?
salama adinoko ny tenimiafiko ID amin'ny findaiko, ary tsy afaka miditra amin'izany aho satria mangataka ny karapanondro azafady, misaotra
Martha Basante dia hoy izy:
Salama maraina tiako ho fantatra ny fomba hamerenako ny id amin'ny iphone 4s-ko.
Nampifandraisiko tamin'ny solosaina findaiko io ary nisy kaonty hafa ankoatry ny ahy niseho ary tsy afaka tamiko ny nitantana ny fifandraisako sy ny whatsapp.
Rehefa nividy ny telefaona finday aho dia efa nampiasaina fa nomen'izy ireo ahy maimaim-poana ary hahafahako mametraka kaonty vaovao amin'ny anarako ary ilay niseho dia tsy fantatro hoe iza izy io ary satria tsy manana ny teny miafiko dia voasakana.
Azafady, raha manana vahaolana amin'ny olako ianao dia tiako ny fiaraha-miasa.
Valiny tamin'i Martha Basante
Jael rincon dia hoy izy:
Tiako ianao hanampy ahy hahita ny tenimiafiko fa adinoko ny tarehin-tsoratra 8 hamafana ny kaontiko ary avelako ho foana ny tel.
Afaka manampy ahy ve ianao fa kivy be aho.
Mamaly an'i Jael rincon
Nofoanana ny ID-paoma nataoko, tsy haiko ny antony, satria tsy nanadino ny ID na ny teny miafiko aho dia niditra tao amin'ny Internet ary nanao ny zava-drehetra, nanova ny teny miafina ary tonga lafatra ny zava-drehetra, fa rehefa manandrana azy amin'ny alàlan'ny telefaona aho dia tsy manome. 'tsy mamela anao hanao na inona na inona, ary ny hafatra "Error fanamarinana, ny Apple ID na ny teny miafina; diso ireo" Tena tsy hitako izay hatao intsony
Ny iphone 5 mini-ko ary niditra tao amin'ny pc-ko ary namboarina tamina iTunes fa manontany ahy ny id sy ny teny miafiko efa noforoniko ary icloud ny id sy ny teny miafiko ahoana no hataoko eo amin'ny efijery ilay signal nametraka ny puce dia mivoaka 3g fa tsy afaka miditra aho. deci ny hisokatra mba afaka miantso milaza amiko izay azoko atao efa nanao andrana maro aho ary tsy misy manome ahy herintaona hahafahako mamerina ny teny miafiko sy ny id
Elgato dia manolotra ny kojakoja ilaina amin'ny fahatongavan'i HomeKit